Shir dhaqaale oo ka furmey Addis Ababa - BBC News Somali
Shir dhaqaale oo ka furmey Addis Ababa
9 Maajo 2012
Image caption Shir caalami ah oo dhaqaalaha Afrika loogu hadlaaya oo ka furmay Ethiopia
Magaalada Addis Ababa waxaa ka furmaya Shir loogu hadlaaya koboca dhaqaalaha africa.
Shirkani waxaa ka qayb galaya hogaamiyayaal Africa ka socda, madaxda shirkadaha waaweyn ee ganacsiga iyo khubaro dhanka dhaqaalaha.
Dalalka dunida ee maanta kobacooda dhaqaaluhu sida xawliga ah u korayo waxa kamid ah kuwa ku yaalla Africa
Lix wadan oo Afrikaan ah ayaa kamid ahaa 10-ka dal ee ugu sareeya liiska wadamada uu dhaqaalahooda sare u kacaayay tobonkii sano ee ugu dambeysey. Afrika waxaa la filaya in dhaqaalaheeda uu boqolkiiba lix uu kobco. Arritani aya dadka qaaradda u noqonaayso war wanagsan, iyadoo waddamada Europe ay la taacaalayaan dhaqaale xumo.
Shirkani waxaa ka qeyb galaaya Ilaa 700 oo mas'uul, waxaana kamid ah madaxweynaha Nigeria Goodluck Jonathan, iyo kan Rwanda Paul Kagame, waxaana diirada lagu saari doonaa horumarinta ganacsiga iyo isbadelka. Waxaa kale oo laga hadli doonaa sidii loo hormarin lahaa hogaanka Afrika, iyo dhaqaalaha gaarka loo leeyahay.
Qaaradda Afrika in kasta oo uu horumarkaasi ka jiro, hadana waxaa soo wajahay dhibaatooyin kale, sida cunno yari, shaqo la'aan, abaaro iyo isbadelka cimilada. Arrimahaasi ayaa hadii aan wax laga qaban, waxay hakin karaan wax kasta oo horumar ah ee ay qaaraddu ku tallaabsato.